Equatorial Guinea oo ka badisay Tuniisiya - BBC News Somali
Equatorial Guinea oo ka badisay Tuniisiya
Cabdifataax Ibraahim Cagayare BBC Somali Service
1 Febraayo 2015
Image caption Tuniisiya hadda waxa ay ka hartay tartanka.
Kooxda marti galinaysa tartanka Koobka qaramada Afrika ee Equatorial Guinea ayaa si uu muran ku jiro waxa ay kaga adkaatay kooxda Tuuniisiya, waxa ayna markii ugu horreysay gaartay nus dhammaadka koobka Qaramada Afrika.
Sidii ay ciyaarta marka hore ku billaabatay iyo markii dambe meeshii ay ku biyo shubatay ayaa aad u kala duwanayd, oo jawiga garoonka ayaa ahaa mid aad u kacsan oo mararka qaarna xitaa garoonka ayaa isla gariirayay, buuqa iyo sawaxanka ka soo baxayay taageerayaasha Equatorial Guinea awadeed.
Tuuniisiya ayaa inta badan ciyaarta wanaagsanayd, oo waxa ay soo bandhigtay ciyaar ay wada jeclaysteen intii daawashada u joogtay garoonka.
Ciyaar kaliya kuma aanay hakan ee gool ayeyba dhaliyeen oo weerraryahankooda Axmed Akaichi ayaa shabaqa cuksiiyay kubbad uu u soo habeeyay Xamsa Mathlouthi.
Halkaana waxaa ku damay iftiinkii Equatorial Guinea oo afkii baa juuqda gabay, balse rajadii nolosha ayaa u soo laabatay daqiiqadii ugu dambeysay ee wakhtiga dheeriga ah ee lagu daray ciyaarta, halkaasi oo gool kulaad muran badan dhaliyay oo loo dhigay xulka Equatorial Guinea uu gool u badalay Javier Balboa ciyaartiina 90-kii daqiiqo waxay ku dhammaatay barbaro 1-1 ah.
Jawiga garoonka ayaa mar qura isbadalay oo ciyaartoyda iyo maamulka kooxda Tuuniisiya ayaa cabasho Muujiyay.
Wakhti dheeri ah ayaa loo baahday si loo kala saaro labada kooxood, oo isla markiiba Balboa ayaa fursad uu helay ka faa’iidaystay una qabeeyay xulkii Tuuniisiya.
Markii uu garsooruhu ku dhawaaqay seeriga dhammaadka ciyaarta, ayaa ciyaartoyda Tuuniisiya mar qura waxa ay ku yaaceen oo ay dhuunta ka galeen garsoorihii oo waxaa khasab noqotay in ciidamada booliska ay arrinta soo fara geliyaan.
Dhinac kasta ayey ka mareen oo waa ay ku qaylinayeen ilaa markii dambe uu ka galay gudaha dhismaha garoonka.
Taageerayaasha Equatorial Guinea ayaa billaabay in ay caagag iyo gasacado ay cabitaan ka dhameysteen in ay ku tuuraan ciyaartoyda, waxaana ciyaaryahan ka mid ah ciyaartoyda Tuuniisiya la arkayay isagoo dib ugu tuuray caag taageerayaasha.
Equatorial Guinea ayaa waxa ay la dheeli doontaa Ghana ama Guinea.